Fanodikodinana volan’ny fonksionera Tsy miteny ireo mpiasa fa matahotra famindran-toerana
«Nasaina nanasonia izahay fa tsy nisy mari-bola ilay nosoniavina ary lelavola 12.000 ariary no azonay. Ny an’ny toerana sasany aza latsaky ny 10.000 ariary.”
Hoy ireo mpiasam-panjakana izay nandray ny solom-pen’akoha hanaovana fety avy tamin’ny Filoham-pirenena. Voalazan’ny mpizara vola fa ao ny laharam-pindain’ny DAF mpitantam-bola raha mila fanazavana. Noho ny tahotra valifaty sy ny famindran-toerana dia nandray tsy fidiny ilay vola ireo mpiasam-panjakana. Voalaza fa nozaraina tamin’ny “vacataires” ny vola azo, indrindra tamin’ny Ministeran’ny Fanabeazana sy Fampianarana ka izany no nampihena azy. Manoloana ny karama vary masak’ireo “vacataires” tokoa dia tsy nialona izany ny “ECD sy ny EFA” ary ireo efa mpiasam-panjakana raikitra.
Eny amin’ny Bianco ny raharaha
Manahy mantsy ireo mpiasam-panjakana fa tsy ireo “Mpampianatra-FRAM” sy “vacataires” no nahazo izany fa voahodikodina tanteraka ny volam-panjakana. Ny hita mantsy dia tsy nisy nandray vola ireo “vacataires”. Andrasana ny fampitam-baovaon’ny fiadidiana ny repoblika raha tena 65.000 ariary no nomena ireo mpiasam-panjakana rehetra.Misy manko ireo milaza fa naharay io vola io tokoa fa ny ankamaroany, na ny teto an-drenivohitra aza zara raha nahazo ampahany. Voalazan’ny tompon’andraikitra iray fa efa any amin’ny BIANCO ity raharaha ity. Saingy mila fantatry ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly fa nanao sonia taratasy tsy nisy mari-bola ny ankamoroan’ny mpiasam-panjakana.